ठोरीको सीता गुफामा विशेष पूजा, रामको मूर्ति स्थापना गर्ने घोषणा – Namaste Dainik
July 19, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ठोरीको सीता गुफामा विशेष पूजा, रामको मूर्ति स्थापना गर्ने घोषणा
४ साउन,वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमि ठोरीमा पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चामा आएको ठोरीस्थित सीता गुफामा विशेष पूजा गरिएको छ । स्थानीयवासीले शनिबार सीता गुफा,वनशक्ति मन्दिर लगायतका शक्तिपिठहरुमा कलशयात्रा सहित विषेश पूजा गरेका हुन् ।
‘वर्षौंदेखि हामीले रामनवमीमा पूजापाठ गर्दै आइरहेको क्षेत्र हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा राम जन्मभूमिको प्रसंग आयो,’ उनले भनिन्,‘त्यसैको खुसीयालीमा विशेष पूजा गरेका हौं ।’
Onlinekhabar बाट सम्भार।
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बाटो निर्माणमा खटिएका ७ मजदुरको निधन
आज बुधवार श्रीकृष्णको पुजा अर्चना गरे मिल्नेछ यस्तो सफलता! श्रीकृष्ण कि जय!
हिन्दु शास्त्रनुसार हामीले पुजा गर्दा यस्ता गल्ति गर्न हुँदैन्: